Soo dejisan Auslogics File Recovery 7 – Vessoft
Soo dejisan Auslogics File Recovery
Recovery File Auslogics – software ah inuu ka soo kabsado faylasha tirtiray noocyada kala duwan. Software ayaa u saamaxaaya in ay soo kabsadaan ka files lumay ay sabab u tahay qalad ah oo shil nidaamka, weeraro virus iyo dhowr sababood oo kale. Recovery File Auslogics ku jira qaab dabacsan oo raadinaya taas oo ay taageertaa fursado badan raadinta. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad si nabad ah uga saarto faylasha iyaga oo aan dib u soo kabashada. Sidoo kale Recovery Auslogics File u saamaxaaya in ay abuuraan disk gurmad in file image ah si looga hortago khasaaro ka mid ah xog muhiim ah.
Helay files of noocyada kala duwan
Debecsan search engine
Taageerada kaararka flash ah
Waxay abuurtaa image disk ah
Auslogics File Recovery Software la xiriira: